जान्नुहोस्, कसरी कम गर्ने विषादीको असर? - Everest Dainik - News from Nepal
जान्नुहोस्, कसरी कम गर्ने विषादीको असर?
काठमाडौं, असार २४ । कस्तो तरकारी किन्नुहुन्छ? टलक्क टल्किने र ताजा देखिने तरकारी सबैको रोजाइमा पर्छ । तर यस्तै तरकारीमै विषादीको मात्रा बढी हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । बरु अलिअलि किरा लागेको, मध्यम आकारको, बांगोटिंगो, सामान्य चमक भएको तरकारीमा कम विषादी हुन सक्छ । बेमौसमीको दाँजोमा मौसमी तरकारी र फलफूलमा विषादी कम हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस रसुवागढीमा आँखाले विषादी परीक्षण
ट्याग्स: pesticides, vegetable